Amazon Fire mbadamba nyochaa - News Ọchịchị
Amazon Fire mbadamba nyochaa
M nwere nnọọ ala na-atụ anya nke a £ 50 mbadamba. Ma Amazon Fire kụrisịa ha niile. Ọ bụ n'ezie ezi dị ịrịba ama otú not-efu ọ bụ mgbe ọ na-efu ya mere obere.
Isiokwu a na-akpọ “Amazon Fire mbadamba nyochaa: a otutu mbadamba maka dị nnọọ £ 50” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Thursday 12 November 2015 07.00 UTC
Amazon si ọhụrụ ala na-eri Fire jụrụ ajụjụ: nwere ike a mbadamba na-eme ka ị azụ dị nnọọ £ 50 bụla, ma ọ bụ zụta ise ma na-otu free, abụ ọma ọ bụla na niile?
Ọ bụ ise version nke mbụ Fire mbadamba, nke mbụ oru na 2011 dị ka Amazon na-anwa undercut Apple si iPad na-emepụta a ala-eri mbadamba iji nweta ya akwụkwọ na video ọrụ.
A dịghị-frills nwa Mat plastic ahu. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Oké, chunky na sturdy bụ ihe kasị mma nkọwa nke Fire mbadamba. Kpuchie ke textured nwa plastic, ọ weighs 313g, bụ ihe karịrị 1cm oké na-ele oké mkpa n'aka.
Ọ na-ele ka ọ bụrụ na ọ nwere ike na-kụrụ aka ma ọ bụ abụọ na-enweghị nke. Amazon-azọrọ na Fire mbadamba bụ ugboro abụọ ka inogide dị ka ihe Apple iPad Air 2 na ụlọ ọrụ si "daharia ule". M nwere ike nke ọma kweere na, ma ya nta size eleghị anya na-arụ di uku na na.
Ọkà okwu ahụ na azụ dị oké ezu na-ekiri video mgbe handheld, ma ọ bụghị oké ma ọ bụ doo anya iji na-ekiri a video mgbe saa igwe na-aga na-pelt na kichin.
The 7in ihuenyo bụghị HD. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The 7in ihuenyo bụghị HD. Ọ nwere a mkpebi nke 1024 x 600 pikselụ, nke bụ n'okpuru kacha nta 720p mkpebi maka HD. Ọ na-nwere a dịtụ ala pixel njupụta nke 171 pikselụ kwa inch - ọ nwere iPad ma ọ dịkwa ihe na-erughị a nke isii nke na-eri.
Ma ihuenyo bụ ihe ijuanya mma maka price. Ọ bụ ezi uche na-egbuke egbuke, nwere ezigbo ikiri angles na bụ yi, ọbụna ma ọ bụrụ ya ojii na-a bit isi awọ. Ma, ọ dịghị nwere ambient Ìhè ihe mmetụta, otú ị ga-aka ịgbanwe ya ka ọ ghara ịhụta onwe gị n'abalị, na ọ bụghị kpọmkwem crisp.
Ọ bụghị kwa ọjọọ nke na-ekiri video ma ọ bụ na-egwu egwuregwu, mgbe ọ bụ passable maka ịgụ akwụkwọ.
Njikọta: Wi-Fi, Bluetooth
Akụkụ: 191 x 115 x 10.6mm
Games, ngwa ọdịnala na fim bụ ezi
The Fire mbadamba nwere 5GB nke onye ọrụ inweta ohere na-osisi, na a microSD kaadị oghere maka agbakwunye ọzọ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Fire mbadamba si 1.3GHz processor na 1GB Ram na-agaghị na-emekwa ka ụwa iritu, ma ha ijuanya ruru eru m ule. The mbadamba bụ karịsịa sprightly na-arụ ọrụ, ma e ọ na lag-jupụta.
Videos kwajuru na-egwuri n'egbughị oge, Egwuregwu ndị ahụ ezigbo ihe ka ukwuu n'oge, gụnyere graphically kpụ ọkụ n'ọnụ egwuregwu na nke mbadamba si ibu nwanne na Fire HD 10 kpagbuo. Games dị ka Ncheta Valley were ogologo oge Ibu Ibu karịa ihe iPad, na ịmafe n'etiti agba ọsọ ngwa ọdịnala bụ obere umengwụ site n'oge ruo n'oge, ma ọ dịghị ihe na bụ kwa infuriating.
Batrị were maka gburugburu awa ise nke video playback na ihuenyo tụgharịa ruo kacha ìhè, aba na ya obere inyoghi inyoghi. Nchaji bụ adịghị ewe, na-ewere ihe karịrị awa ise ka n'ụzọ zuru ezu na-ana. The Wi-Fi na Bluetooth na-arụ ọrụ dị ka ị pụrụ ịtụ anya. A microSD kaadị oghere dị maka agbakwunye nchekwa.
Enweghị ihe ambient Ìhè ihe mmetụta pụtara ntuziaka ukpụhọde nke backlight dị mkpa, karịsịa na-egbuke egbuke ìhè anyanwụ ma ọ bụ na mgbede. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Fire mbadamba-agba otu version nke Amazon si Android 5.1.1 dabeere na Fire OS dị ka Fire HD 10. Ọ na-eme na-na ọdịnaya na egwuregwu ngwa na mfe.
Ọ na-nwere ohere Amazon si ngwa ahịa, Otú ọ dị, nke pụtara na ị na-ejedebeghị na-ahọrọ ngwa na egwuregwu tụnyere Google si Play Store. kasị, ma ọ bụghị ihe niile nke n'elu ngwa ọdịnala dị, dị ka na-enuba video ọrụ ndị dị ka Netflix.
The Fire nakwa nwere Amazon si Underground ọrụ, nke awade ngwa ọdịnala n'ihi na free na free na-ngwa ịzụrụ, ọ bụrụ na ị denye aha na ụlọ ọrụ si Prime ọrụ.
Dị ka ị pụrụ ịtụ anya, Amazon si mwekota nke ya video, music, akwụkwọ na ụlọ ahịa ọrụ bụ magburu onwe.
The ese foto bụ ndị ogbenye, na n'ezie mma zuru oke maka Snapchat. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The 2-megapixel igwefoto na azụ bụ egwu. Ọ na-arụpụta ihe oyiyi nke banyere otu àgwà na zuru ezu dị ka a CCTV igwefoto, na bụghị ezigbo onye. The VGA selfie igwefoto bụ marginally mma, ma nke ahụ abụghị sị a otutu.
The Amazon Fire efu dị nnọọ £ 50 na dị na a ubé mkpari "Zụrụ ise na-otu free" (BFGOF) enye. The mbadamba na-abịa na Mgbasaozi na mkpọchi ihuenyo, Otú ọ dị, na wepụ ha na-efu £ 10.
The kacha nso abụọ mbadamba si Samsung ma ọ bụ Asus na-eri elu nke £ 70.
Ọ bụghị a kediegwu mbadamba ọ bụla gbatia nke n'echiche. Na ihuenyo bụ ala mkpebi, batrị anaghị adịru ogologo na, ya ese foto na-n'ụzọ dị mwute, ọ bụ arọ na chunky na ọ nwere nani 5GB nke esịtidem nchekwa inweta onye ọrụ.
Ọ bụ ihe iPad ma ọ bụ ọbụna Nexus 7, ma ọ bụ a ọnụ ala ma na-eji obi ụtọ 7in mbadamba na-ele ka ọ ga-adịgide ma na n'ezie adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ọ dịghị n'ihi na ị pụrụ nnọọ ịzụta onye ọzọ.
Ọ na n'ezie-eme ka uche ọ bụrụ na ị denye aha na Amazon si Prime ọrụ maka video, akwụkwọ na ngwa, ma na £ 50 ọ bụ ihe mkpali Buy.
Uru: ọnụ ala, Amazon video, akwụkwọ na music ọrụ, microSD kaadị oghere, ele inogide
Ọghọm: ala-nchapụta ihuenyo, arọ, chunky, ogbenye ese foto, na-ewe afọ na-ana, ndụ batrị adịghị kediegwu
The mbadamba-ewe ihe karịrị awa ise-ana via microUSB. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Amazon Fire HD 10 nyochaa: ịcha na-ezighị ezi na nkuku egosi a oké ọnụ ndudue
Amazon.com, Android, Nkeji edemede, Ngwa, Nyocha, Samuel Gibbs, mbadamba kọmputa, Technology
← Blackphone 2 nyochaa: nzuzo na-adịghị ga-abịa mgbe ndị na-eri usability Facebook ule Snapchat-style onwe-destructing chat na ozi →